5 Yakakomba SEO Nyaya Dzakafukunurwa Nekuchema Frog | Martech Zone
5 Yakakomba SEO Nyaya Dzakafukunurwa neChemhere Frog
Monday, May 6, 2013 NeChishanu, Nyamavhuvhu 30, 2013 Douglas Karr
Wakambokwenya nzvimbo yako wega here? Iri izano rakakura kugadzirisa zvimwe zvinhu zviri pachena pamwe newebsite yako yaungangodaro usina kucherechedza. Shamwari dzakanaka pa Saiti Maitiro akatiudza nezvazvo Kupopota Frog's SEO Spider. Iyo iri nyore kutsvaira iyo yemahara ine muganho wemazana mashanu emapeji emukati… zvakakwana kune mazhinji mawebhusaiti. Kana iwe uchida zvimwe, tenga iyo £ 500 rezinesi regore!
Ini ndinotenda chaizvo nekukurumidza kwandinogona kuverenga saiti uye nekuona aya mashanu akakosha ekutsvaga Injini Kugadziridza nyaya:
404 Haina Kuwanikwa Nyaya ine zvemukati zvinongedzo, zvekunze zvinongedzo nemifananidzo. Referencing mifananidzo isingawanikwe inogona kudzora yako saiti pasi. Referencing zvemukati zvinongedzo zvisirizvo zvinogona kuvhiringidza vashanyi vako.
Peji Zita ndizvo zvinonyanya kutsoropodza peji rako, wakazvigadzirisa nemazwi akakosha?
Meta Tsananguro zvinoratidzwa sekutsanangurwa kwemapeji ako mune yekutsvaga injini mhedzisiro mapeji (SERPs). Nekuvandudza meta tsananguro, iwe unogona zvakanyanya kuvandudza iyo-yekudzvanya chiyero kune ako mapeji.
Misoro - H1 musoro wenyaya uye iwe unofanirwa kuve uine 1 yepakati musoro pane peji. Kana uine zvimwe, iwe uchazoda kuzvichinjisa kune mamwe misoro. Kupopota Datya kunokuratidza ma H2 tag ako zvakare… uye kuva nezvimwe zveavo mune peji rimwe chete zvakanaka. Yese misoro inofanirwa kuve yakakosha kiyi uye inoenderana nemusoro wenyaya.
Mifananidzo Alt Matagi batsira injini dzekutsvaga mukunongedza zvakanaka mifananidzo yako uye kuratidza mamwe mavara evaverengi vema skrini uye maapplication anovharira mavara (senge pawakaisa blog yako zvemukati mumaemail). Ongorora mifananidzo yako uye zadza imwe nzira yemavara tag ine kiyi-yakapfuma, yakakodzera mavara.
Chimwe chinhu chikuru cheiyo Kupopota Frog SEO Spider ndiro Chinyorwa Mode. Ini ndinogona kutora kutumira kunze kwemakwikwi mapeji kubva pane chishandiso senge Semrush, riise mumavara faira, uye wobva waripinza muScreaming Frog kukambaira nekutora ongororo yezvinhu zvese zvemapeji evanokwikwidza!
Kana iwe uchida kuchera zvakadzama mune rako peji rekutsvaga injini optimization, isu tine izvi zvinyorwa:
Maitiro ekugadzirisa ako Mapeji ekutumira
Tags: crawlerpeji chinokambairakuchema kwedatyaSearch Engine Optimizationsemrushicho chinokambairairo dandemutandeseo zanaweb crawler
Bhenefiti yeMobile Kushambadzira Mashini
May 6, 2013 pa 3: 33 PM
Ichi chishandiso chikuru. Inokurumidza, inoshanda uye ikozvino kana yakangopindirana newordpress kuti iwe ugone kugadzirisa zvinongedzo uye misoro, nezvimwe kubva kuchirongwa ichi. Izvozvo zvingava zvakanyanya kunaka kuti zvive chokwadi. Mubvunzo wangu muzhinji ndewekuti kudonhedza menyu muwordpress seizvi
May 6, 2013 pa 4: 22 PM
May 7, 2013 pa 4: 34 AM
Ndatenda nekutaura kwaDouglas.
Chero chikonzero nei iwe uchishandisa 'nofollow' pane ese ekunze zvinongedzo kubva kune saiti zvakadaro?
May 7, 2013 pa 8: 32 AM
Ehe, nekuti isu tine akawanda anobuda zvinongedzo muchinyorwa chega chega.
May 13, 2013 pa 7: 57 AM
Ndine urombo, handina chokwadi chekuti zvine musoro.
Sei usingazoteveri chimwe chinhu chaunovimba uye uchikoshesa?
May 10, 2013 pa 11: 12 AM
Izvi zvakanakisa kune "Image Alt Tags" chinhu… Maita basa Douglas!
May 28, 2013 pa 4: 08 AM
Ndatenda nekupfupisa kweKuchemerera Datya!
Kunyangwe ini ndichishandisa chimwe chishandiso kubata ne-peji optimization, zvainakidza kutarisa dzimwe nzira kunze uko. Iyo inobva kune yangu arsenal ndeye WebhuSite Auditor, uye ini ndinoishandisa kutsvaga zvakapetwa, zvikanganiso zvekodhi uye yeanokwikwidza pa-peji kuongorora. Chaizvoizvo, chishandiso chiri pa-peji chinofanirwa kuve nacho, kunyanya ikozvino apo usability zvinhu zvakave zvakakosha kune SEO.
May 28, 2013 pa 8: 57 AM
Isu tinoshandisa Webhusaiti Auditor zvakare, @emmettferguson:disqus. Chishandiso chikuru - tichaita chinyorwa pairi zvakare.
Nov 6, 2013 na3:33 AM
Ini ndiri kushandisa Webhusaiti Auditor zvakare uye chandinoda nezvayo ndechekuti haisi iyo mutengo uchienzaniswa neKuchemerera Datya pa99 Pounds pagore.
Feb 6, 2015 at 11:34 PM
Dhora rega rega rawakaisa muScreamingfrog rakashandiswa zvakanaka. Nemadhora zana chete iwe unowana pano mishumo yakawanda uye data kubva kune mamwe maturusi anodhura zvakanyanya uye pamwe sekunyorera pamwedzi.